Danjiraha Mareykanka oo waraaqihiisa u gudbiyay wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya-Sawirro | Gaaloos.com
Home » News » Danjiraha Mareykanka oo waraaqihiisa u gudbiyay wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya-Sawirro
Danjiraha Mareykanka oo waraaqihiisa u gudbiyay wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya-Sawirro
Danjiraha dowladda Mareykanka u soo magacowday Soomaaliya Stephen M. Schwartz ayaa nuqulka waraaqaha aqoonsiga danjirenimo waxaa ku wareejiyay wasiirka arimaha dibadda ee Soomaaliya mudane C/salaam Hadliye Cumar kadib markii maanta ay ku kulmeen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Bracka Obama ayaa danjire Schwartz si rasmi ah ugu magacaabay safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya.
Danjire Schwartz ayaa sheegay in magacaabistiisa ay tahay calaamad muujineysa sida uu u xoogeystay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka, isagoo noqoneya safiirkii ugu horeeyay Mareykanka u soo diraan Soomaaliya muddo ka badan 25 sano.
Waxaa uu intaa ku daray in uu ku faraxsan yahay in uu fursad u helo in dadka Soomaaliyeed uu ka caawiyo dhisamaha nabadda iyo xasiloonida wadanka ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya.
Danjiraha ayaa tilmaamay in mudada uu xilka hayo uu ahaan doono saaxiib dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin isla markaana gacan ka geysta sidii Soomaaliya u noqon laheyd wadan ay xoogan yihiin hey’adahiisa ayna yihiin kuwo dimoqraadi ah.
“Waxaan ka caawin doonaa xaqiijinta amniga, dhismaha hey’ado dimoqraadi ah,ku dhaqanka sharciga iyo kobaca dhaqaalaha Soomaliya,” ayuu yiri danjire Schwartz.
Ugu dambeyntii danjire Schwartz ayaa amaanay horumarka ay Soomaaliya sameysay sideedii sano ee la soo dhaafay waxaama hogaamiyeyaasha Soomaaliya ku booriyay in wixii karaankooda ah ay ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa nolashada dadka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada.
Danjiraha dowladda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la fileyaa in uu ka guddoomo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya markaas oo uu noqon karo danjire xillkiisa gudan karo.
Title: Danjiraha Mareykanka oo waraaqihiisa u gudbiyay wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya-Sawirro
Posted by galmada Net, Published at 11:51 PM and have 0 comments